Nhau dzeBhaibheri: Madambudziko 10 - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEstonia Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen (Cyrillic) Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Ukrainian Umbundu Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Tarira mifananidzo. Mumwe nomumwe unoratidza dambudziko rakaunza Jehovha paEgipita. Munowokutanga ungaona Aroni achirova Rwizi rweNire netsvimbo yake. Paakarova, mvura yomurwizi yakava ropa. Hove dzakafa, rwizi ndokuvamba kunuhwa.
Tevere, Jehovha akabudisa matatya muRwizi rweNire. Aiva pose pose--muhovhoni, midziyo yokubikira, pahuvato hwavanhu--pose pose. Apo matatya akafa vaEgipita vakaaunganidza mumirwi mikuru, nyika ikanuhwa nao.
Ipapo Aroni akarova ivhu netsvimbo yake, huruva ikava umhutu. Ihwo tupukanana tunobhururuka tunoruma. Umhutu hwaiva dambudziko rechitatu panyika yeEgipita.
Mamwe amadambudziko akakuvadza vaEgipita, kwete vaIsraeri. Rechina raiva dambudziko renhunzi huru dzakapinda mumba dzavaEgipita dzose. Dambudziko rechishanu raiva pamhuka. Zhinji dzen’ombe namakwai nembudzi zvavaEgipita zvakafa.
Tevere, Mosesi naAroni vakatora marota ndokuakushira mumhepo. Vakaparira mamota pavanhu nemhuka. Iri raiva dambudziko rechitanhatu.
Pashure pakwo Mosesi akasimudza ruoko rwake kudenga, Jehovha ndokutuma kutinhira nechimvuramabwe. Raiva dutu guru rechimvuramabwe rakaipisisa risina kumbova neEgipita.
Dambudziko rorusere raiva mhashu zhinji. Kwakanga kusina kumbova nemhashu zhinji kwazvo chifocho. Dzakadya chinhu chiri chose chisina kuparadzwa nechimvuramabwe.
Dambudziko repfumbamwe raiva rima. Rima gobvu rakafukidza nyikayo kwamazuva matatu, asi vaIsraeri vaiva nechiedza kwavaigara.
Pakupedzisira, Mwari akaudza vanhu vake kusasa ropa rembudzana kana gwayana pamagwatidziro avo. Ipapo ngirozi yaMwari yakapfuura Egipita. Apo ngirozi yakaona ropa, haina kuuraya aninaani mumbayo. Asi mumba dzose maiva musina ropa pamagwatidziro, ngirozi yaMwari yakauraya matangwe ezvose zviiri munhu nemhuka. Iri raiva dambudziko rechi10.
Pashure peiri dambudziko rokupedzisira, Farao akaudza vaIsraeri kuti vabude. Vanhu vaMwari vose vakagadzirira kuenda, uye usikuhwo vakatanga kubuda kwavo muEgipita.
Eksodho ganhuro 7-12.
Uchishandisa mifananidzo iri kuratidzwa pano, rondedzera matambudziko matatu okutanga ayo Jehovha akaunza paEgipita.
Musiyano upi waiva pakati pematambudziko matatu okutanga nemamwe matambudziko ose?
Nderipi raiva dambudziko rechina, rechishanu, uye rechitanhatu?
Rondedzera dambudziko rechinomwe, rechisere uye rechipfumbamwe.
Jehovha akaudza vaIsraeri kuti vaitei dambudziko rechigumi risati raitika?
Nderipi rakanga riri dambudziko rechigumi, uye chii chakazoitika rapfuura?
Verenga Eksodho 7:19-8:23.
Kunyange zvazvo vaprista veEgipita vaiita zvemashiripiti vakakwanisa kutevedzera matambudziko maviri okutanga aJehovha, chii chavakamanikidzwa kubvuma pashure pedambudziko rechitatu? (Eks. 8:18, 19; Mat. 12:24-28)
Dambudziko rechina rakaratidza sei kukwanisa kwaJehovha kudzivirira vanhu vake, uye kuziva izvi kunoita kuti vanhu vaMwari vanzwe sei sezvavanotarisana no“kutambudzika kukuru” kwakafanotaurwa? (Eks. 8:22, 23; Zvak. 7:13, 14; 2 Mak. 16:9)
Verenga Eksodho 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; uye 10:13-15, 21-23.
Mapoka api maviri akafumurwa neMatambudziko Gumi uye izvi zvinoita kuti tione sei mapoka maviri iwayo nhasi? (Eks. 8:10, 18, 19; 9:14)
Eksodho 9:16 inotibatsira sei kunzwisisa kuti nei Jehovha akabvumira Satani kuramba aripo kusvika zvino? (VaR. 9:21, 22)
Verenga Eksodho 12:21-32.
Paseka yakaita kuti vanhu vazhinji vaponeswe sei, uye Paseka yairatidza chii? (Eks. 12:21-23; Joh. 1:29; VaR. 5:18, 19, 21; 1 VaK. 5:7)